Palestina: Vono olona sa horohoro mandripaka? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2008 18:52 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, বাংলা, Français, عربي, Italiano, English
Ireo lohateny nanaraka ny horohoro tao Dwayat dia nahitana ny hoe ” horohoro amin’ny Bulldozer ao Jerosalema”. Nataon’izy ireo lohalaharana ihany koa ny fifaneraseran’i Dwayat tamina vehivavy Jiosy iray miaraka amin’ny lohateny lehibe toy izao “Nanana sakaiza (sipa) Jiosy vavy ilay mpanafika an’i Jerosalema“. Ny lahatsoratra sasany aza dia sahy nanambara fa nihiaka ny hoe “Lehibe Andriamanitra!” I Dwayat.
live from occupied palestine dia mamelabelatra ny mety ho antony nahatonga an’i Dwayat voahosotra ho mpampihorohoro:
Isan’izay taitran’ireo lohateny lehibe ireo i DesertPeace, ary nitondra fanamarihana momba ny resabe manodidina ny fifandraisan’i Dwayat amina vehivavy Jiosy:
Mizara fomba fijery hafa kosa i Will of KABOBfest; ny sary avoitran’ny bulldozer any Israely sy any Palestina:
Rima Abdelkader , ao amin’ny blaoginy Arabisto.com, dia manampy ny mpamaky hahatakatra izay nitranga amin’ny fitondrana fanazavana toy izao: